Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Education » Indawo yabucala inikezela nge- $ 2 yezigidi kwiCaribbean naseAsia
Iindaba zeAnguilla Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zeRiphabhlikhi yaseDominican • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Resorts • Xanduva • Iindaba Eziphambili ZaseSri Lanka • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism
Ngexesha apho kubonakala ngathi yonke into esiyivayo yonke imihla ziindaba malunga nokufa, uloyiko, uqhankqalazo nolwaphulo-mthetho, kuyawenza umoya ulungileyo ukuva malunga nento ehamba kakuhle emhlabeni. Njengezigidi zeedola ezinikelwe kuluntu ukuxhasa imfundo. Kwakuloo mgca wokucinga, ii-PrivateNI iiNdawo zokuHlala zabucala zibhengeze ukuba zibophelele i-2 yezigidi zeedola ukulungiselela izibonelelo zesikolo kunye neekhompyuter kuluntu lwasekhaya kwilizwe ngalinye.
Ilizwe ngalinye liya kufumana umnikelo we- $ 500,000 exhaswa ngokupheleleyo yi-INI iiholide zabucala, kunye neTim Reynolds Foundation.
Eli phulo kukwandisa imfundo yeNzululwazi yeKhompyutha kunye nokuphucula amaziko emfundo, njengokuphucula amathala eencwadi, kunye namagumbi okufundela kumazwe apho kukho iiholide zabucala ze-INI.
Oku kuqinisa ukuzibophelela kwenkampani ekuncediseni kwimfundo nasekuxhaseni uluntu lwasekhaya.
Ulwakhiwo lokuphuhlisa iilabhoratri zekhompyuter ezintsha kuzo zombini Angwila kwaye iSri Lanka izakuqala kamva kulo nyaka, ilandelwe sisikolo esitsha kwidolophu yaseRio San Juan. Iihotele zabucala ze-INI ngoku zinxibelelana nootitshala base-Thai ukumisela ukuba yeyiphi i-500,000 yeedola eya kuba luncedo kakhulu. UTim Reynolds kunye ne-areNI bonwabile ukukwazi ukubonelela abahlali bendawo ngezixhobo ezihlaziyiweyo nezala maxesha ukubanceda ngoku nakwizizukulwana ezizayo.
UTim Reynolds, umseki / umnini we-INI iiNdawo eziHlalelwa zangasese, ungumntu othanda ukuzinikela ngokuzimisela ngokuzimisela ekuphuculeni ubugcisa kunye nemfundo kwihlabathi liphela. Uye wenza igalelo elibonakalayo kuphando lwezonyango nakwizibonelelo-yena ngokwakhe osindileyo ekonzakaleni okungathethekiyo komnqonqo. UTim usungule ngokupheleleyo ingeniso NI Izifundo zobugcisa eThailand, eAnguilla, eSri Lanka, e-US, naseRiphabhlikhi yaseDominican ukunceda abanomdla kubazobi ukuba bafezekise amaphupha abo asekwe kubugcisa ngokusebenzisa ikharityhulamu yokupeyinta yasimahla ngokupheleleyo, ebanzi. Ngokudibeneyo nenkqubo yezemfundo, izifundiswa zinceda abafundi ukuba bathengise kwaye bathengise imisebenzi yabo kwihlabathi liphela ngemiboniso yegalari, nakwi-intanethi kwiwebhusayithi yeholide: GalleryNI Art Gallery. I-100% yengeniso evela kwintengiso yayo yonke imisebenzi yobugcisa iya ngqo kubazobi.
UReynolds ngebhongo ubonakalisa ubugcisa obuvela kubafundi kwiiholide zakhe kwaye iindwendwe zingathenga umsebenzi wobugcisa njengesiqhelo sokuhlala kwabo kwizikolo zasekuhlaleni.
Ukukhethwa kunye nomgangatho wobugcisa obuvela kubafundi kuzo zontandathu ii ÀNI Art Academy ziyamangalisa kakhulu. Sizakuqhubekeka nokuthweswa izidanga amagcisa aphambili kwii-Akhademi amashumi eminyaka kwaye sonwabile ngamancedo amatsha esakhiwayo ukuze sandise amaphulo ethu okufundisa kuluntu lwasekhaya, ”utshilo uReynolds.
"I-NI izimisele ukuphakamisa iindawo esihlala kuzo nabantu basekuhlaleni kwaye ngokuhambisa iikhomputha kunye nokuphuhlisa amaziko enzululwazi ekhompyutheni, abafundi baya kubanakho ukufunda nokuphila kakuhle ngaphandle kokushiya iindawo abahlala kuzo," uvale ngelo uTim Reynolds.